ka hortaga iyo xalka buurnaanta iyo caayilka saaidka ah :
Side uga hortagi kartaa buurnaanta?
Buurnaanta saa’idka ahi waa xanuun laga dhaxlo xanuuno khatara isla markaana laga hortagi karo. Hadaba inaad joogteeyso miisaankaaga saxda ah ee caafimaadka ah iyo jimicsiga joogrtada ah ayaa ka qayb qaata miisaan dhimista. Si aad uga hortagto raac talaabooyinkaan hoose.
La soco miisaanka jirkaada: is-miisaamista joogtada ah waa talaabada ah ugu muhiimsan ee aad kaga hortagi kartid buurnaanta iyo cayilka saa’idka ah. Sidoo kale isku-day inaad isticmaasho cabirka (body mass index) BMI kaas oo aan uga hadalnay horay, si aad wax badan uga akhriso cairka BMI riix kinkiga midabka bluuga ah.
Jimicsiga: jimicsiga joogtada ah sida cayaarista gymka iyo socodka oo add badiso halkii aad isticmaali lahayd gawaarida
Cuntada: cuntada isu-dheeli tiran waa furaha ugu muhiimsan ee caafimaadka. Hadaba is dib u fiiri cuntadaada waxa ay ka koobantahay iskuna day inaad cuntid cunto dheeli tiran
Side ku yareyn kartaa buurnaanta saaa’idka ah?
Miisaan dhimis: inaad sameeysato yool miisaan dhimis ah waxay ka mid tahay talaabooyinka ugu muhiimsan ee aad wax ka bilaabi kadho, xog ururin la sameeyay ayaa lagu ogaaday in qofka buuran oo miisaankiisa dhima boqolkiiba toban 10% ay keento caafimaad dheeriya sidoo kalena ka hor tagto xanuunada.
Jimicsiga: qofka oo sameeya cel-celis 30 daqiiqo oo jimicsi maalinla ah ayaa khubaradu caafimaadku ku talisaa si qofku miisankiisa u dhimo. Taas mid lamida dadka buuran waxay u baahan yihiin inay yareeyaan saacada malintiiba ay ku qaatan fadhiga iyo xaraka la’anta sida daawashada tv-ga iyo hurdada dheeriga ah.
Maareeynta cuntada: qofka buuran waxaa lagula taliyaa inuu ka fogaado cuntada nooca mac-macaanka ah cuntada dufanka badan, iyo cabitaanada sokorta badan isla markaana daayo cuntooyinka culus uuna ku bedelo cunto yar-yar joogtona ah. Sidoo kale cabista biyo badan iyo iska yareenta cuntada guriga dibadiisa laga cuno waxay qayb ka qaadata miisaanka qofka oo yaraada.
Tags: buurnaanta, cayilka sa'idka ah, jimicsiga, obesity
Previous Postbuurnaanta ama cayilka saa’idka ah!
Next PostTalasiin Q2